कहिले बनिसक्छ दशरथ रंगशाला? :: निशा भण्डारी :: Setopati
कहिले बनिसक्छ दशरथ रंगशाला?
निशा भण्डारी काठमाडौं, पुस २६
निर्माणाधिन त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला। तस्बिरः निशा भण्डारी
मुलुककै ठूलो र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल मैदान ‘दशरथ रंगशाला’ को आउँदो फागुनभित्र पुनःनिर्माण सक्ने सरकारको योजना छ ।
गोर्खा भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको सो रंगशाला पुनःनिर्माण हुन नसकेका कारण तीन वर्षयता कुनै पनि खेलकूद गतिविधि हुन पाएको छैन । वि.स. २०१३ सालमा दशरथ रंगशाला निर्माण भएको हो ।
रंगशाला नबन्दा नजिकिँदै गरेको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) र एशियन खेलको तयारीका लागि खेलाडीलाई अभ्यास गर्न पर्याप्त खेल मैदान छैन। त्यसैले जतिसक्दो चाँडो दशरथ रंगशाला पुनःनिर्माण गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनारले सो रंगशालाको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको र आगामी फागुन महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताउँदै आएका छन्।
नेपालमै हुने तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकूद प्रतियोगिता र उद्घाटन सत्र सोही मैदानमा हुने भएकाले हरहालतमा रंगशालाको पुनःनिर्माण निर्धारित समयमै सक्ने पक्षमा रहेको मन्त्री सुनारले दाबी गरेका छन्।
अहिले पुनःनिर्माण गर्न लागिएको रंगशाला साधारण र भिआइपी प्याराफिट गरी १५ हजार दर्शक अट्ने क्षमताको हुनेछ। पहिलेको तुलनामा अहिले केही कम क्षमताको बन्न लागेको हो ।
खेलकुद मन्त्रालयले रंगशाला पुनःनिर्माण गर्न ५५ करोड ४२ लाख छुट्याएको छ । यसअन्तर्गत रंगशालासहित पौडी पोखरी र राखेपको एउटा भवन पनि बन्नेछ ।
रंगशाला बनाउन भ्याट बाहेक १६ करोड ५० लाख खर्च लाग्ने बताइएको छ।
पहिले खाली मैदान रहेको यो स्थानमा वि.स. २०१३ सालमा रंगशाला बनाइएको हो। त्यतिबेला फुटबल खेल्ने उक्त सार्वजनिक मैदान सानो टुँडिखेलको नामले प्रसिद्ध थियो।
त्यतिबेला रंगशालाको पूर्वपट्टि सेनाको छावनी थियो। उत्तरतर्फ बाँसको झ्याङ थियो भने दक्षिणतर्फ खुला थियो। पश्चिमतर्फ राष्ट्रका केही विशिष्ट व्यक्ति आउँदा बसेर खेल हेर्ने घर बनाइयो। रंगशालाको पहिलो संरचना त्यही बेला बनेको हो ।
रंगशालाको अहिलेको स्वरूप २०५५ सालमा तयार भएको थियो । नेपालले आठौं साफ आयोजना गर्ने निर्णयलगत्तै चीनले आधुनिक रंगशाला निर्माण गर्न सहयोग गरेको थियो।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आयोजना गरेको त्रिभुवन च्यालेन्ज शिल्ड फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा जनकपुर चुरोट कारखाना र बंगलादेशको मुक्तिजोद्धाबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको थियो । विस २०४४ फागुन २९ गतेको त्यो दिन अचानक हावाहुरीसहितको वर्षा हुँदा रंगशालामा भएको भागदौड मच्चियो र ७१ खेलप्रेमीले ज्यान गुमाए। सोही घटनामा नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार्दै तत्कालीन शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिएका थिए। यो घटनालाई नेपाली खेलकूदको इतिहासमा कालो दिनका रुपमा सम्झने गरिन्छ।
खेल क्षेत्रलाई माथि उठाउने उद्देश्यका साथ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसपटक सातै प्रदेशमा रंगशाला बनाउने योजना पारिएको छ । यसवर्ष प्रदेश नं २, ६ र ७ गरी तीन ठाउँमा रंगशाला बनाउने योजना रहेको राखेपले जनाएको छ। यसका लागि सरकारले सात करोड ५० लाख बजेट छुट्याएको छ।
रंगशाला निर्माणका लागि सरकारले यसअघि कायम भएका ७५ मध्ये ७३ जिल्लामा जग्गा छुट्याएको भएपनि अधिकांश जिल्लामा रंगशाला निर्माण प्रक्रिया शुरु पनि हुन सकेको छैन। राखेपका अनुसार अहिलेसम्म मुगु र रौतहटमा खेल मैदान बनाउन जग्गाको जोहो गर्न सकिएको छैन।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पुस २६, २०७५, ०६:५४:००
फिफा वरियतामा नेपाल ४ स्थान तल झर्‍यो, उत्कृष्ट चार देश यथावत
खेलकुद संघलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मातहत राख्न मिल्दैन : खेलकुद मन्त्री विश्वकर्मा
सिन्धुपाल्चोकमा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेल रेस
तीन बाबुछोरा तेक्वान्दोमा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको एकै स्पर्धामा उत्रिँदै